«GARE ROUTIERE MAKI» ANDOHATAPENAKA Nadoboka am-ponja ireo jiolahy roa mpanendaka
Natolotra ny fitsarana ireo roalahy mpanendaka eny amin’ny fiantsonana taksibe Andohatapenaka ary notazonina vonjy maika eny Antanimora omaly alatsinainy 20 janoary 2020.
Lehilahy roa no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahafito etsy 67 ha ny 18 janoary noho ny fanendahana. Ny sabotsy 18 janoary lasa teo tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany maraina dia nisy tovolahy 2 mpanendaka tsikaritry ny olona teo amin’ny fiantsonana taksibe « gare routiere Maki » Andohatapenaka. Avy hatrany dia nampandre ny mpitandro ny filaminana teo akaiky teo ihany ireto olona ireto ka avy dia nisambotra azy roalahy ny polisy. Rehefa nosavaina izy 2 lahy dia nahitana finday 3, vola 18000 ariary ary clé USB 01 tany aminy. Araka ny filazan’ireo olona ireo dia efa mpanendaka eo amin’io faritra io izy ireo ary rehefa avy manao ny asa ratsiny dia tonga dia mandositra.